«Ondry nania…!» -
08/06/2018 admintriatra Tresaka 0
Namonjy niverina eny amin’ny Antenimieram-pirenena daholo mantsy hono ireo solombavambahoaka 73 araka ny feo re. Ka voatery niverina am-bala ireo ondry nania! Sahirana mafy mihitsy mantsy izy ireo namono ny afo natsangany. Toraka izany koa ireo mpanao gazety mpomba ireto mpanongam-panjakana ireto izay tena niala aman-kodiny mihitsy nandresy lahatra sy nitelina ny vava navoakany tamin’ny ora nahafantarana ny anaran’ny praiminisitra Ntsay Christian.
Vava nge izany nataon’ny sasany izany raha vao nandre ny anaran’ity praminisitra ity e! Tampoka teo ny ampitso, tahaka ireny sosoa notampohan-drano ireny, asa noteren’iza tany angaha fa voatery niverina am-bala e! Izay nge no maha sarotra amin’ity raharaha ity e! Mandeha tsy misy jiro any ny sasany dia midona amin’ny “poteau” avy eo. Mitovy amin’izany ireto depiote 73 ireto, voapoka tany amin’izay nalehany tany dia indreo fa niverina am-bala.
May ny afo natsangany ihany ankehitriny ireto solombavambahoaka ireto. Milaza ho tsy mila izao fitondrana izao intsony, mitaky ny fialan’ny Filoha. Inona anefa ny zava-misy ankehitriny? Nanaiky hiditra ao anatin’ilay fitondrana nosoram-potaka ihany. Milaza ho miady amin’ny kolikoly, izany rahateo no natao baikom-pitolomana teny an-kianja. Inona anefa no tena marina? Hay efa nomelohin’ny Fitsarana miady amin’ny kolikoly ilay depiote miseho mpitarika ny hetsika.
Tsy jamba na dondrona akory ny vahoaka e! Tsy izay mahay milalao ny fahoriam-bahoaka sy mpanao sorona ny aim-bahoaka akory dia mihevitra fa mahatarika olona. Ahoana izao ny momba ireny olona maty natao fitaovana teny amin’ny lapan’ny tanàna ireny? Iza amin’ireo solombavambahoaka 73 ireo no mba mandray an-tanana ny fiainan’ny fianakaviany? Ain’olona izao ve no latsaka dia holalaovina sy hatao fitaovana tahaka ireny? Mba matahora an’Andriamanitra ry zalahy a!
Ny zavatra mahafinaritra ao anatin’izao zava-misy izao aloha dia ny hoe “niverina am-bala ireo ondry nania e!”. Ny vavaka manova zavatra tokoa!
Fikambanana AV7 : Ampiaro amin’ i Ravalomanana amin’ izay ny didy
“Mendrika andraisana fepetra hentitra sy haingana ny fihetsika izay naton’dRavalomanana ireny” io no valin-teny izay nomen’ny filohan’ny fikambanan’ny niaram-boina noho ny raharaha 7 febroary Rafaralahy Bona Jean pierre vantany vao nanotaniana mikasika ny hetsika izay ...Tohiny
Raharaha Lylison sy Riana Andriamandavy : Tsy mitsabaka ny asan’ny fitsarana ny Antenimieran-doholona
Herin’aratra : Tsy hisy ny fiakarany amin’ity taona ity